smart vision EQ, Daimler သည် 'carsharing' ၏အနာဂတ်ကိုမည်သို့မြင်သနည်း Gadget သတင်း
smart vision EQ, Daimler သည် carsharing ၏အနာဂတ်ကိုမည်သို့ရှုမြင်သနည်း
Daimler လုပ်ငန်းစုကြီးဖြစ်သောကုမ္ပဏီများစွာရှိသည်။ Mercedes-Benz နှင့် smart တို့မှာ၎င်းတို့အနက်မှနှစ်ခုဖြစ်သည်။ စက်တင်ဘာ ၁၂ ရက်မှာတင်ပြလိုပါတယ် သူ၏အထူးရူပါရုံကို carsharing။ ၎င်းသည်လုံးဝကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြီးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးသည့်မော်ဒယ်သစ်တစ်ခုဖြစ်သည် စမတ်ရူပါရုံကို EQ fortwo.
ကျန်ကုမ္ပဏီ၏ကျန်မော်ဒယ်များနှင့်တူညီသည့်တစ်ခုတည်းသောအရာမှာသေးငယ်သောအရွယ်အစားဖြစ်သည်။ ဒီလျှပ်စစ်နှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဗားရှင်း 2,7 မီတာပတ်လည်တိုင်းတာသည်။ ထို့အပြင်၎င်းအတွင်း၌သိသာထင်ရှားသောပျက်ကွက်မှုနှစ်ခုရှိသည်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ၎င်းတွင်ခြေနင်းများ မရှိ၍ စတီယာရင်ဘီးလည်းမရှိကြောင်းတွေ့မြင်နိုင်သည်။
1 'carsharing' သဘောတရားသစ်
2 ကောင်းမွန်သောအမြင်အာရုံ EQ ဖြင့်သင်အနာဂတ်၏မိုက်ကယ်နိုက်ဖြစ်လိမ့်မည်
အဆိုပါကောင်းသောရူပါရုံကို EQ fortwo တစ် ဦး ဖြစ်လိမ့်မည် Daimler EQ ပလက်ဖောင်း၏ထုတ်လုပ်မှုသို့သွင်းထားမယ်လို့မော်ဒယ် 10ကားတွေထဲမှာ SUV ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီမော်ဒယ်ကိုအာရုံစိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူကသူ့ရဲ့ဒီဇိုင်းဟာထူးခြားတယ်လို့သင်ပြောနိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ နောက်ဆုံး၌ရောင်းလိုက်သောယူနစ်သည်သင်ဤမော်ဒယ်အကြောင်းကိုအနည်းငယ်ပေးခဲ့သည်မှာသေချာသည်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့က၎င်း၏ကိရိယာအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့အာရုံကိုဖမ်းမိခဲ့ကြောင်းငြင်းပယ်လို့မရပါဘူး။
ပထမ ဦး ဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်သူကသူ့အတွက်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတာပါ carsharing သို့မဟုတ် shared မော်တော်ယာဉ်။ ဆိုလိုသည်မှာ smart ကားများသည်သေးငယ်သောလျှပ်စစ်ကားများရှိသည့် car2go ကဲ့သို့သောပလက်ဖောင်းများ။ ထို့အပြင် Daimler သည်၎င်း၏ရည်မှန်းချက်ကြီးမားသောအဆိုပြုချက်အတွက်မှီခိုအားထားကြောင်းကုမ္ပဏီမှထုတ်ပြန်သောအချက်အလက်များအရသိရသည်။ Car2go အရသိရသည် ၁.၄ စက္ကန့်တိုင်းတွင်သင်၏ရေယာဉ်မှကားကိုအသုံးပြုသည်။ လက်ရှိတွင်ဖောက်သည် ၂.၆ သန်းရှိသည်။ သို့သော် ၂၀၂၅ ခုနှစ်တွင်သုံးစွဲသူ ၃၆ သန်း၏ပမာဏကိုရောက်ရှိရန်ဤအဆိုပြုချက်ဖြင့်အသုံးပြုသည်။
ကောင်းမွန်သောအမြင်အာရုံ EQ ဖြင့်သင်အနာဂတ်၏မိုက်ကယ်နိုက်ဖြစ်လိမ့်မည်
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သကဲ့သို့ဖြစ်သည် smart vision EQ fortwo တွင်စတီယာရင်ဘီးသို့မဟုတ်ခြေနင်းများမရှိပါ။ ဒါကြောင့်၎င်းသည်နေရာချထားသူများအတွက်အတွင်းပိုင်းနေရာများအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်။ ဒီတူရိယာတွေအစား ၂၄ လက်မအလယ်မျက်နှာပြင်မှာနေရာထိုင်ခင်း ၂ ခုနဲ့ ၄ လက်မဘေးမျက်နှာပြင်နှစ်ခုအတွက်အဆင်ပြေစွာနေထိုင်နိုင်အောင်နေထိုင်သူတွေအတွက်အပန်းဖြေဖို့အတွက်တပ်ဆင်ထားတယ်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်အပြင်ပန်းနှင့်ရှေ့မျက်နှာပြင်တွင် smart vision EQ fortwo တွင် ၄၄ လက်မ LED panel ကိုလည်းတွေ့ရသည်။ ၎င်းသည်ဖောက်သည်မှအပြည့်အဝပြုပြင်နိုင်သည်။ ပြီးတော့ဒီကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမော်တော်ယာဉ်ရဲ့အားသာချက်တွေထဲကတစ်ခုကတော့သူတစ်ယောက်တည်းကပဲ client ကိုသွားရှာတာပါပဲ။ အသုံးပြုသူ carsharing သင်၏ဝန်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့်သင်ဝန်ဆောင်မှုကိုလိုချင်ကြောင်းသာသင်အသိပေးရမည် စမတ်ဖုန်း ဒါမှမဟုတ်တက်ဘလက်, ထိုရိုးရှင်းသော။ ဆိုလိုသည်မှာ ကျနော်တို့ကခေတ်သစ်မိုက်ကယ်နိုက်နှင့် KITT ဖြစ်လိမ့်မယ်.
ဒါပေမယ့်ကားရှေ့မျက်နှာစာမှာဒီကြီးမားတဲ့မျက်နှာပြင်အကြောင်းနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်တွေကမ်းလှမ်းခြင်းအားဖြင့်ကားဟာသတင်းအချက်အလက်ကိုပြသနိုင်မှာပါ။ ဥပမာအချို့မှာ - သင်တက်နေသောဖောက်သည်အမည်၊ သင်သွားနေသောလိပ်စာသို့မဟုတ်လူသွားလူများအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာသတင်းအချက်အလက်ကမ်းလှမ်းသည်။ ထို့အပြင်ကား၏နောက်ဘက်မီးများသည်အပြင်ဘက်သို့သတင်းအချက်အလက်များလည်းပေးနိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည်အချက်ပေးမှုများမှသည်အသွားအလာအခြေအနေနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်အထိဖြစ်နိုင်သည်။
နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပြissuesနာများနှင့်စပ်လျဉ်း။ ဤ smart vision EQ fortwo သည် ၃၀ kWh အားပြန်သွင်းနိုင်သည့်လီသီယမ်ဘက်ထရီများဖြင့်ထောက်ပံ့သည်။ ကျနော်တို့က၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အတိအကျမသိရပါဘူး။ သို့သော်ဤအယူအဆ၏အခြားအားသာချက်တစ်ခုမှာတစ်ခုသည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်သွားသည်သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုပြီးဆုံးသွားသောအခါ၎င်းသည်တစ်ခုတည်းသည်အားသွင်းဘူတာတစ်ခုကိုရှာဖွေပြီး၎င်း၏ဘက်ထရီများကိုစတင်ပါလိမ့်မည်။ ဘယ်လိုလျှပ်စစ်ကွန်ရက်နဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်မှာလဲ။ ကောင်းပြီ၊ မင်းမှာ plug တွေမလိုအပ်တော့လို့ပါ။ အားသွင်းဘူတာများတွင် induction hob များတပ်ဆင်ထားမည် ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ; ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်သူ့ဟာသူပါဝါရရှိရန်ကြိုးများမလိုအပ်ပါ။
နောက်ဆုံးတော့စမတ်ကအရာရာတိုင်းကိုစဉ်းစားနေတယ်ဆိုတာငါ့ကိုသိစေပါ။ လမ်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးသည်ဤ smart vision EQ fortwo တွင်အထင်ရှားဆုံးသောအကြောင်းအရာများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ တံခါးဖွင့်ခြင်းစနစ်အသစ်ကဲ့သို့သောရှုထောင့်များကိုအမြင့်ဆုံးအထိဂရုစိုက်သည်။ နှစ် ဦး စလုံးသည်ရှေ့ရှုထောင့်တစ်ဝိုက်တွင်လျှော။ လှည့်ပတ်နေပြီးအနာဂတ်ကိုကြည့်ကောင်းစေသည်။ ထို့အပြင်ဤစနစ်သည် ၀ င်ရောက်မှုကိုများစွာလွယ်ကူချောမွေ့စေပြီးနေရာချွေတာသည်။ ထို့အပြင်သမားရိုးကျနည်းဖြင့်ဖွင့်လှစ်ခြင်းမပြုပါကအခြားမော်တော်ယာဉ်များသို့မဟုတ်စက်ဘီးစီးသူများနှင့်တိုက်မိရန်အန္တရာယ်ရှိမည်မဟုတ်ပါ။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက: ကုမ္ပဏီ Daimler
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » NOTICIAS » smart vision EQ, Daimler သည် carsharing ၏အနာဂတ်ကိုမည်သို့ရှုမြင်သနည်း
Segway miniLITE နှင့် miniPLUS၊ မြန်။ လုံခြုံသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်မော်ဒယ်များ
MINI Electric Concept - 2019 တွင်ပေါ်လာမည့်လျှပ်စစ်မော်ဒယ်၏အကြိုမြင်ကွင်း